Ninku gabadha kama dhali waayine, hagrashaa jirta!! | Doodwadaag waa Danwadaag.
Ninku gabadha kama dhali waayine, hagrashaa jirta!!
Waxaa la yiri islaan Ceebla’ la dhihi jirey ayaa carruurteeda ugu jeclayd gabadha/inanta ugu yarayd oo ay ula baxday Farxiya, wayna ku indha doogsan jirtey. Berya wax la joogaba Farxiya kortay, qurux iyo qiimana la soo baxday. Rag badanna hunguri ka gal, oo u soo haasaawe tage, waxaase calaf u geeyey Guuleed Garbaweyne oo Rabbi xoolo iyo awlaadba ugu deeqay, dhawr xaasna leh, magac iyo maamuusna bulshada ku dhex leh. Xarrago qiima leh ka bixi Farxiya, Ceeblana maqsuud ku noqotay guurka inanteedii. Ceebla’ siday Farxiya u jeclayd si ka daran ayay u jamatay inay aragto, ursato, korna u qaaddo carruur Farxiya dhashay balse Farxiya uur laga waa. Sannadba sannad buu u dhiibay, degmadii oo dhan baana ku sheekaysatay.
“Waa ma dhasho iyo Guuleed wuu ku khasaaraye xoolihiisii ha loo celiyo” baa la isla dhexmaray. Ceebla’ iyo Farxiyaba hadaladaa iyo kuwa ka qallafsanba soo gaare balse maalintii dambe iyadoo meel fagaare ah la joogo, wiilkii ay soddogga u ahaydna, waa Guuleed Garbaweyne e, uu fadhiyo ayaa dhawr qof oo rag iyo dumar isugu jira Ceebla’ weydiiyeen sababta Farxiya ilmo looga la’yahay. ” Ee inantu miyay xanuunsanaysaa? ee inanta ardooyin ma ka cuudisay? ee inanta ….” ayay is daba dhigeen. Ceebla’ oo eedda gabadheeda loo leexinayo ka dagaalamaysa ayaa goobtii ka tiri ” Ninkaa garbaha weyn gabadhayda kama dhali waayine, hagrashaa jirta” hadal caan baxay ayuu noqday! Xaaladdaa waxaa ka dhigan dhibta shacabka soomaaliyeed ku sugan yihiin iyo mashruuca la dagaalanka argagixisada.
Tan iyo intii argagixisadu ka soo fuftay dhulka soomaalida, dadkana ay ku khaldeen u gargaaridda dalka iyo diinta, burbur iyo baaba’ mooyee wax kale lagama dhaxlin. Waxaa maanta shacabka u cad inaan argagixisadu lahayn hayb iyo deegaan gaar ah, dal iyo diinna ayan ka naxayn. Kuwa qariyana waa uun abeeso ninkii koriyow adiga uunbaa u aayi, waxaad beryo ku faraxdid sida ay qayrkaa u gelaysaba , adiguna maalintaaday dhiigga iyo dheecaanka kaa jaqi. Balse waxaan isqabanayn tirada ragga soomaalida iyo shisheeyaha ah ee ku mushahaar qaata la dagaallanka argagixisada iyo sida ay illaa maanta ugu guul darraysteen inay cirib tiraan bal e in maanta argagixisadu awood u yeesheen inay madaxtooyada weeraraan! Hashu maankayga gaddaye, ma masaar bay liqday? Shaxdu isma qabanayso!!!
In ka badan labaatan kun oo askari oo AMISOM ah, millateriga, nabadsugidda iyo booliiska Soomaalida oo ay tiradooda kor u dhaaftay soddon kun waa marka lagu daro kuwa jooga Somaliland iyo Puntland ayaa soo af jari waayey wiilal af duuban oo aan lahayn rug iyo raas loogu hagaago, tiradooda lagu qiyaaso afar illaa shan kun! Ciidamadaa faro iyo agab ba haysta waa Guuleed Garba-weyne, Farxiyana waa dalka argagixisadu degtay, Ceeblana waa shacabkaa dhibban ee rajo ku noolka ah ee naawilaya nolol qurux badan lakiin hadalkii wuxuu isugu biyo shubtay oraahdii Ceebla’ ee Argagixiso lama soo af jari waayine hagrashaa jirta.
Qoraa: Burhan Ali